Retail Leader Archives - Glory Assumption Space
1. Retail Leader – Female (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)/ဗဟန်းမြို့ နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Bakery Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Retail Leader – Female (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)/ဗဟန်းမြို့ နယ်။ •	Any Graduate with Sales & Marketing diploma or certificate •	At least 1 year experience in related field and sound knowledge of retail chain management •	Leadership skill, Presentation skill, Customer services oriented skill, team work, creative thinking and problem solving skills •	- အလုပ်ချိန် (9:00 AM to 5:30 PM) •	- စနေ, တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ •	- Ferry ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ ) [caption id="attachment_2733" align="alignnone" width="300"] Portrait ofayoung attractive business woman.[/caption]